Libya: MSF waxa ay ku baaqeysaa in daryeelka caafimaadka aan la is hortaagin - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Jineefa, 12 Maarso 2011 – Iyada oo uu sii xoogeysanayo iskahorimaadka ka socda dalka Libya, ayaa ururka bani’aadmanimada ee caafimaadka ee Médecins Sans Frontières (MSF) uu aad uga welwelsan yahay xaaladda dadka dhaawaca ah ee dhexda u galey iskudhacyada rabshadda wata, waxaana uu ku baaqayaa in si degdeg ah oo aan caqabad lahayn dadka loo gaarsiiyo gargaar caafimaad, iyada oo aan siyaasad loo oogeynin.
Saddexdii toddobaad ee ugu dambeeyey, ayaa kooxaha MSF ee ku sugan xuduudda Tunisiya iyo magaalada Banghazi ay sahay caafimaad gaarsiinayeen tas-hiilaadka caafimaadka ee Libya ku yaalla waxaana ay si firfircoon uga shaqeynayaan sidii loo gaari lahaa degaannada ku yaalla qaybta galbeed ee dalka, ee uu dagaalka xun uu ka socdo.
Dhowr qaybood oo dalka a ka mid ah oo uu iskahorimaad ka jiro, sida Zawiyah iyo Misrata, ayaa dad tiradoodu ay badan tahay aaney heli karin gargaar dibadda uga yimaada, iyada oo lagu soo warramayo inay jiraan baahiyo caafimaad oo ba’an iyo ayna gabaabsi noqdeen daawada iyo qalabka caafimaadka.
“Waxa aan si weyn uga welwelsannahay in la ishortaagey gaarsiinta daryeel caafimaad iyo dhibaatada haysata bukaannada ku jira tas-hiilaadka caafimaadka ee dadweynaha ka dhexeeya ee degaannada ay dowladdu ka taliso”, ayaa uu yiri Bruno Jochum, oo ah agaasime hawlgallada u qaabilsan MSF.
MSF oo ah urur caafimaad oo bani’aadamnimo, waxa ay mar kale qireysaa in ay muhiim tahay in ay awood u yeelato in ay si taabogal ah ay wax uga qabato baahiyaha caafimaad ee degdegga ah ee ay dadku qabaan, iyada oo aan loo eegeynin dhinaca ay ka tirsan yihiin ama asal ahaan halka ay ka yimaadeen.
“Arrinta ugu weyn ee aan maanta u baahanahay waa in na loo oggolaado in aan dhaqso u gaarno dadka ay rabshaddu saameysey ee jooga gudaha Libya”, ayaa uu intaa ku sii darey Bruno Jochum. “In kasta oo ay dagaallo xooggan socdaan, haddana kooxaheenna caafimaadka, oo toddobaadyaba si ulakac ah ugu xayiran xuduudda Tuniisiya ee Ras Ajdir ayaa aan arkeynin bukaanno dhaawac ah oo loo soo oggolaadey in ay u soo gudbaan dhinaca Tuniisiya. Waa muhiim in dadka ay suuragal u ahaato in ay ka soo cararaan meelaha uu iskahorimaadka ka socdo si ay u soo magangalaan degaanno ammaan ah oo ku yaalla gudaha Libya ama dibaddeedaba.”
Waa muhiim in dhammaan kooxaha iska soo horjeeda ay raacaan anshaxa caafimaadka iyo sharciga bani’aadamnimada ee caalamiga ah ayna ixtiraamaan tas-hiilaadka, baabuurta iyo shaqaalaha caafimaadka, maaddaama ay taas tahay sida keliya ee bukaannadu ay ku heli karaan daryeelka caafimaad ee degdegga ah ee ay u baahan yihiin.
MSF waxa ay sii waddaa gargaarka ay siiso dadka rayidka ah iyada oo sahay caafimaad gaarsiineysa Libya. Tan iyo markii kooxdii ugu horreysey ee MSF ka socota ay awood u heshey in ay gasho bariga Libya 24kii Febraayo, labaatan iyo labo tan oo sahay caafimaad ah ayaa lagu qaybiyey degaannada la ogaadey in ay ka jiraan baahiyaha caafimaad ee ugu ba’an. Toban iyo kow tan oo kale oo qalab caafimaad ah ayaa u diyaar ah in la gaarsiiyo meelaha uu dagaalka socda ka dhaliyey in ay sahayda caafimaadku gabaabsi noqoto iyo in ay ka dhashaan baahiyo caafimaad.